विशेष भरिएका aubergines - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
Verduras45 मिनेट2 व्यक्ति
जब मेरो साथीले यो प्लेट ल्याए काममा खाने र मैले यो प्रयास गरें, मलाई थाहा थियो कि म यो तुरुन्तै गर्नेछु र अब, जब उहाँले मलाई नुस्खा दिनुभयो र मैले देखे कि यो कत्ति सजिलो थियो ... म काममा लागें।
मलाई औबर्गिन गर्ने बानी थियो मासु भरिएको, तर मैले तिनीहरूलाई कहिल्यै प्रयास गरेन अन्य चीजहरूले भरिएको।
त्यसोभए आज म तपाईका लागि केहि स्वादिष्ट औबर्गिनहरू ल्याएको छु टुना, कडा उमालेको अण्डा र चीज। स्वादिष्ट र धेरै स्वस्थ !!
1 विशेष भरिएका aubergines
मासुले भरिएको क्लासिक नुस्खाको बारे बिर्सनुहोस्। आज हामी यसलाई विशेष भर्ने तयारीका साथ गर्नेछौं।
१ ठूलो बैंगन
१ थप टुर्जिन ओलिभ तेलमा टुना (सानाको, करीव 1० ग्राम)
टमाटर सॉसको large ठूला चम्मच
फिलाडेल्फिया प्रकारको पनीरको 100 ग्राम (यदि तपाईं आहारमा हुनुहुन्छ भने यो हल्का हुन सक्छ)
ग्रेटिनको लागि ग्रेटेड चीज जुन राम्रोसँग पग्लन्छ
हामी आधा मा unpeeled औबर्गिन खोल्छौं। हामी मासु हटाउँछौं (छालामा जोडिएको सानो मासु छोड्ने ख्याल राख्दै ताकि हामीले भर्दा यो बलियो रहन्छ)।
हामी दुई भागहरू भेरोमा कन्टेनरमा छालालाई माथि राखेर राख्छौं, तिनीहरूलाई छोप्नुहोस् र रिजर्भ गर्नुहोस्।
हामीले टोकरीमा अण्डा राखेपछि, हामी पानीलाई गिलासमा थप्दछौं। हामी गिलास बन्द गर्छौं र शीर्ष भागमा एबर्जिनका साथ भारोमा राख्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
जब समय सकियो, ओवन-सेफ डिशमा औबर्गिन छालाको छेउ तल राख्नुहोस् र एक चुटकी नुन र काली मिर्च थप्नुहोस्।
त्यसपछि हामी अण्डाको साथ टोकरी बाहिर निकाल्छौं, हामी यसलाई चिसो पानीबाट पार गर्छौं र यसलाई छिल्छौं।
हामी गिलासबाट पानी खाली गर्छौं, यसलाई कुल्ला र यसलाई राम्रोसँग सुकाउँछौं। हामी अण्डा थप्छौं र काट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 3। यदि तपाईंलाई यो बढि किन्न गरिएको छ भने, तपाईं यसलाई केहि सेकेन्डमा प्रोग्राम गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले बुक गर्‍यौं।
हामी गिलासमा टुना क्यानबाट तेल निकाल्छौं। हामीले प्याजलाई चौथाईमा काट्यौं र यसलाई गिलासमा थप्यौं। हामीले सुरुमा आरक्षित गरेको औबर्गिनको मासु पनि थप्छौं।
त्यसपछि हामी स्वाद गर्न नमक र काली मिर्चको एक चुटकी राख्छौं। कार्यक्रम गर्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 5। हामी भित्ता र ढक्काहरूबाट तरकारीको अवशेषहरू कम गर्छौं ब्लेडहरू र कार्यक्रम तिर Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
अर्को, हामी कडा उमालेको अण्डा थियौं जुन हामीले आरक्षित गर्यौं, टूना, फिलाडेल्फिया चीज र फ्राइड टमाटर। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, चम्चा गति, बाँया पालो, तापमान º ०º।
Aubergines भर्नुहोस् र grated पनीर संग छर्कने। हामी सुनको खैरो नभएसम्म ग्रेभिनमा ओभनमा राख्छौं।
थप जानकारी - भरिएको बैंगन
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, १ घण्टा भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » विशेष भरिएका aubergines
मलाई कत्ति स्वादिष्ट लाग्दैन, मलाई के भरिपूर्ण aubergines मन पर्छ, र यो नयाँ फारम म प्रयास गर्न लागिरहेको छु, यस अद्भुत ब्लगको लागि धेरै धेरै xicas धन्यबाद।
धन्यवाद भेरोनिका! तपाईं देख्नुहुनेछ तिनीहरू कति स्वादिष्ट छन् र तिनीहरू बनाउनको लागि कति सजिलो छ। मलाई भन
कूल फेसन भन्यो
यो पकवान यो छोड्न र अन्त्यमा तताउन उपयुक्त छ ??????????????????
कि म सधैं बिहान बनाएको खाना छोड्नु पर्छ।
कूल्डफेशनलाई जवाफ दिनुहोस्
यो गर्न छोड्नुहोस् र अन्तमा न्यानो राख्न यो उत्तम छ। मैले यो यो गरेँ: तपाईं सबै कुराको लागि छोड्नुहोस्, ग्रेटेटेड चीजको शीर्षमा छर्कियो। त्यसोभए तपाईले यसलाई ओभनमा २१० at मा करीव १० मिनेटको लागि राख्नुपर्दछ वा तिनीहरू सुनौं खैरो हुनुपर्दछ। धन्यवाद!
इनमा भेगा भन्यो
aubergines मा र पेट मा राख्नु। !!! स्वादिष्ट, यो नुस्खा लगातार बनाइनेछ,
Inma vega लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंलाई उनीहरूले मन पराउने आनन्द! म उनीहरूलाई साँच्चिकै माया गर्थें। त्यसैले म तिनीहरूलाई बारम्बार गर्न जारी राख्छु। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
नमस्ते इरेन, यो नुस्खा कस्तो देखिन्छ? मैले तिनीहरूलाई मासुले मात्र बनाएको थिएँ। तर यो यति सजिलो देखिन्छ कि सोमबारको लागि म ती सामग्रीहरू खरीद गर्दछु जुन मैले हराइरहेको छु र मैले तिनीहरूलाई बनाएँ ... कति स्वादिष्ट !!! अभिवादन र धन्यवाद
मैले तपाईंलाई पहिले नै भनेको छु कि तिनीहरू एकदम सजिलो छ, त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस् र नहिचकिचाउनुहोस्। तिनीहरूलाई चलिरहेको बनाउनुहोस् !! तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि ती कति धनी छन्। तपाईं तिनीहरूलाई पहिले नै तयारै छोड्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं तिनीहरूलाई स्थिर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक महान पकवान हो!
मैले यस साताको अन्त्यमा तिनीहरूलाई गरें र यो सफल भयो !! सजिलो, छिटो र महान। धन्यवाद छोरीहरू, म तपाईंलाई दिनहुँ पछ्याउँछु।
मार्था, कस्तो राम्रो, म तपाईंलाई धेरै मन पराउँदा खुसी छु। मलाई यो मन पर्यो र यो सजिलो छ ...
नमस्ते, यो धेरै राम्रो देखिन्छ, म यसलाई भोलि गर्नेछु, म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु कि टुनाको क्यान ठूलो वा सानो मध्ये एक हो भने, धेरै धेरै धन्यवाद
क्यालीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार काली, अवश्य पनि मैले यो निर्दिष्ट गरेको छैन! यो एक सानो डिब्बा छ। यद्यपि यो ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ, उनीहरूसँग लगभग 80० ग्राम छ। म अब यो नुस्खा मा राख्न जाँदैछु। धन्यबाद!
सत्य: एक्जिट गर्नुहोस् त्यसैले म ईजीपीएलहरू मन पराउँदिन। मैले रिसिप देखेँ, म इन्ग्रेडियन्टहरू किन्छु र खाने कुराको लागि तयार गर्दछु, मेरो हसबन्डले यो धेरै मनपरायो। के मैले अधिक चीजहरू राखें, किनकि हामी त्यसलाई माया गर्थ्यौं। यो एक डिश हो म पुन: विचार गर्दछु। धन्यवाद
नमस्ते Mamen, कस्तो राम्रो! सत्य यो हो कि aubergines धेरै राम्रोसँग टुना र फिलाडेल्फिया पनीरको भेषमा छन्। म धेरै खुसी छु कि तपाईंले तिनीहरूलाई धेरै मन पराउनुभयो। धन्यवाद!
नमस्ते, मैले अन्तिम रात नुस्खा बनाएँ र म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि यो एक उत्कृष्ट डिश हो। मेरी श्रीमती उनीहरूलाई फेरि गर्न चाहान्छन्। यदि कसैलाई यो पकवान बनाउने बारे शंका छ भने, त्यसलाई हटाउनुहोस्, किनकि यो पक्का सफलता हो।
नमस्ते रिकार्डो, तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद! तपाईंले उनीहरूलाई यति धेरै मन पराउनुभयो भनेर जान्न पाउनु कत्ति खुसीको कुरा। म तिनीहरूलाई मन पराउँछु कि तिनीहरू कती सरल छन् उनीहरू कती स्वादिष्ट छन्। धन्यवाद!!
एना गुरेरो गिल भन्यो
ग्रहोला: मैले तिनीहरूलाई पहिलेदेखि नै उनीहरूको दुर्गन्धको गन्ध बनाएको छु, तर मैले धेरै भर्खरै छोडेको छु किनकि बैंगनको सट्टामा मैले तीन बनाएको छु र तपाईले मलाई फाइदा लिन एक विचार दिनुहुन्छ कि भनेर हेर्न सबै थोकमा राखेको छु। भर्ने, केहि मिर्च Piquillo वा केही आलु भर्न राम्रो हुनेछ? म तिनीहरूलाई प्रयास गर्न को लागी छु। धन्यवाद
Ana guerrero gil लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते अना, अवश्य! भरीव पोकिलो मिर्च, आलु वा क्यानेललोनी भर्नका लागि उत्कृष्ट छ। कस्तो राम्रो विचार !!
म auergines को साथ एक नुस्खा खोज्दै थिए, तर मलाई यो थर्मोमिक्समा कसरी लागू गर्ने थाहा थिएन, र तपाईंको यो नुस्खाको साथ, सत्य यो हो कि तपाईंले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। आज खरीदमा aubergines झर्छ!
Afizionau लाई जवाफ दिनुहोस्
Afizionau, राम्रो विकल्प! यो प्रयास गर्नुहोस्, तपाईले देख्नुहुनेछ कि स्वादिष्ट तरिका aubergines खानको लागि। तपाईं यसको बारेमा हामीलाई भन्नुहुनेछ !!
ठिकै भन्नुपर्दछ कि तिनीहरू राम्रा छन्, ती छिट्टै भ्याइसकेका छन्, तपाईंलाई धेरै भाँडा चाहिने छैन र यो aubergines खानेको बिभिन्न तरीका हो, किनकि मलाई कीमाले पकाएको मासुले भान्साउने बानी थियो, यो एक नुस्खा किताबको लागि जान्छ! धन्यबाद
म धेरै खुसी छु अफिजियानो, तपाईंसँग पहिले नै अर्को नयाँ सजिलो र द्रुत विधि छ! धन्यवाद।
ग्लोरिया मार्कीयो भन्यो
मलाई लाग्छ तिनीहरू सब भन्दा राम्रो aubergines हो जुन मैले कहिल्यै स्वाद लिएको छु, म तिनीहरूलाई माया गर्थे, उनीहरू घरमा धेरै चोटि खस्छन् र मलाई केवल पनीर मनपर्दछ, यस नुस्खाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
Glendia marqueño लाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो महिमा! तिमीलाई थाहा छैन म कति रमाउँछु। यदि तपाईंलाई चीज मनपर्दैन भने, तपाईं यसलाई सँधै एक बचेमलमा बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
माफ गर्नुहोस् तर ...... मसँग एउटा बैंगन मात्र बाँकी रहेको थियो, म के गर्ने? किन यो केहि पक्राउको लागि प्रयोग हुने थियो? धन्यवाद तपाई बिना नै हामी उत्तम हो हामी मेरो घरमा खाना खाँदैनौं हहाहाजजा
Ary_21_@hotmail.com लाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, तपाईं यसलाई कडा उमालेको अण्डा, पकौरा, टोस्ट, piquillo मिर्च, उमालेको आलु, पास्ता बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ... यसको असीमित संख्यामा प्रयोगहरू छन् !! तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ।
के म यस रेसिपीलाई थर्मोमिक्स तर अधिक मात्राको साथ make व्यक्तिको लागि बनाउन सक्छु?
अवश्य पनि अन्ना! मैले राखेका मात्राहरू प्रति व्यक्ति आधा ठूलो एग्प्लान्टको लागि हो। त्यसोभए तपाईका people व्यक्तिको लागि मaऔबर्गिनहरू राख्दछु (मलाई यकिन छैन कि तिनीहरू भिरामा फिट हुनेछन् यदि तिनीहरू धेरै ठूला छन् भने)। यदि तिनीहरू फिट हुँदैनन् भने तपाईं तिनीहरूलाई ओभन वा माइक्रोवेभमा पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ? र अवयवहरू, यो परिमाण x lying गुणा गर्ने कुरा हुनेछ, मलाई भन्नुहोस् यदि तपाइँसँग केहि प्रश्नहरू छन्, ठीक छ? तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ!
बधाई छ Evamadrilas26! म तपाईंलाई खुसी छु खुशी छु। सत्य यो हो कि यो एक धेरै राम्रो नुस्खा हो, यो सधैं राम्रो बाहिर आउँछ। तिनीहरू धेरै स्वादिष्ट छन् ... हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा र हामीलाई यी सुन्दर टिप्पणीहरू दिनुभएकोमा धन्यबाद!
Irenearcas लाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो लुर्डेस, म कत्ति खुसी छु ... र यदि सानोले पनि यो मन परायो भने ... म अझ बढी खुसी छु ... यो एकदम चुनौती हो लो। हामीलाई भन्नुभएकोमा र हामीलाई दिनहुँ पछ्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामना!
सत्य यो हो कि तिनीहरू धेरै राम्रा छन्, मैले क्रीमको टेट्रा ब्रिक भर्ने क्रममा थपेको छ र यो नरम छ, यो प्रयास गर्नुहोस् कि यो धेरै राम्रो छ।
मेरो maaadre, म क्रीम को त्यो गत्तेकोठाको साथ तिनीहरू कति स्वादिष्ट हुनेछ कल्पना गर्न पनि सक्दैन ... यो पक्कै यो एक अपराजेय बनावट दिनुभयो। हामीलाई भन्नु भएकोमा धन्यवाद! म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु कि धेरै खुसी छु।
नमस्कार इरेन। हामी वास्तवमै तपाईको auergines मन पराउछौं। तिनीहरू सुन्दर तरिकाले गरिन्छन्, र तिनीहरू धेरै नरम छन्। धन्यवाद!
खैर Esperanza, कस्तो खुशी। तपाईलाई मन परेकोमा म खुसी छु। सत्य यो हो कि तिनीहरू स्वादिष्ट छन्। हामीलाई अनुसरण गर्न र हामीलाई लेख्नु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। यहाँ वरिपरि भेटौंला!
मिरिटम 52२ भन्यो
तर तपाईं पनि औबर्गिन मोल्ड खानुहुन्छ, त्यसैले बोल्न, होइन "'?? उहाँ उहाँ
तिनीहरूलाई समाप्त गर्न मसँग थोरै बाँकी छ! १
तिमीलाई अभिवादन !!
मिरिटम 52२ लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, हो, उसले सबै कुरा खान्छ। एग्प्लान्ट स्किनमा धेरै गुणहरू र पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। तपाईं कति स्वादिष्ट देख्नुहुनेछ! के तपाईले मलाई मन पराउनु भयो भने पछि भन्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद !!
म तपाईंलाई नुस्खाको बधाई दिन्छु। हिजो मैले तिनीहरूलाई खानेकुरा बनाएँ र हामी उनीहरूलाई माया गर्थ्यौं।
कति राम्रो मोनिका! म कत्ति खुसी छु म तिनीहरूलाई माया गर्दछु, यो एक नुस्खा हो जुन मलाई धेरै मनपर्दछ। एउटा ठूलो चुम्बन र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
मलाई स्प्रेड पनीरको लागि विशिष्ट बेचामेल प्रतिस्थापनको आदर्श मनपर्दछ, त्यसैले यो एक सरल र समृद्ध विधि हो!
धन्यवाद इरेन !!
धन्यबाद! यो एक राम्रो विकल्प हो किनकि यसले धेरै स्वाद र क्रीमनेस थप गर्दछ। म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु खुशी छु। चुम्बनहरू!
मेरो भगवान, तिनीहरू कति स्वादिष्ट छन्, अहिले म तिनीहरूलाई खाइरहेको छु र मलाई लाग्दैन कि मैले तिनीहरूलाई अति उत्तम खाएको थियो। उत्कृष्ट !! धन्यबाद
धन्यवाद लोरेना! म धेरै खुशी छु कि तपाईंले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नु भएको छ, म व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई धेरै मन पराउँछु। तपाईको सन्देशका लागि र हामीलाई अनुसरण गर्न धेरै धेरै धन्यबाद। एक राम्रो चुम्बन !!
नमस्ते! नुस्खा महान बाहिर आउँछ। मैले यो पहिले नै धेरै पटक गरिसकें। म गल्ती गर्नमा धेरै दु: खी छु .. तर मलाई के गर्ने थाहा छैन !! तथ्य यो हो कि भरिने जहिले पनि धेरै पानी बाहिर आउँछ। यो मलाई प्याज भएको सबै व्यञ्जनहरूसँग हुन्छ। मसँग थर्मोमिक्स २१ छ।
यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? के त्यहाँ चाल छ? ? मैले यो विधि धेरै पटक बनाइसकेको छु। यो मन पर्यो । तर मैले जहिले भरिने तनाव समाप्त गर्नु पर्छ ...
एक चुम्बन र धन्यवाद !!
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले यस लेखलाई मोडल २१ र between१ बीचको बराबरताका साथ हेर्नुहोस्: http://www.thermorecetas.com/2012/02/27/cocinar-con-thermomix-tm31-y-tm21/
हाम्रा सबै रेसिपीहरू st१ औं का लागि डिजाइन गरिएको छ त्यसैले समय अलि परिवर्तन भयो। प्याज फ्राई गरेपछि कप हटाउने प्रयास गर्नुहोस् र बाँकी सामग्रीहरू थप्नु अघि यसलाई केही मिनेटहरू दिनुहोस्। तपाईंले हामीलाई भन्नुहुनेछ! र हामीलाई लेख्न र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। अंगालो!
नमस्कार, मलाई यो नुस्खा मनपर्दछ किनकि ती स्वादिष्ट छन्। म जान्न चाहान्छु कि ती ग्रेचिन अघि वा पछि स्थिर गर्न सकिन्छ र यदि एक पटक फ्रिज गरियो भने आर्बर्जिन धेरै पानी हुन्छ?
शुभ - प्रभात! यो नुस्खा शानदार छ, मैले कोशिस गरेको छु र यो स्वादिष्ट छ, र यसको माथि स्वस्थ र केही क्यालोरीहरू छन्। यो स्थिर गर्न सकिन्छ? अग्रिम धन्यवाद, सादर!
नमस्कार अना, हो यो समस्या बिना स्थिर गर्न सक्दछ। तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यबाद। म धेरै खुसी छु कि तपाईंले उनीहरूलाई यति धेरै मन पराउनुभयो, मेरो लागि, तिनीहरू मेरो मनपर्नेहरू हुन्। 😉
बेकन र gorgonzola साथ युवा गहुँ